Sina CGS banga azo ovaina fanodinam-bidy azo ovaina | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny efijery azo zahana CGS banga azo ovaina dia vokatra novolavolain'ny orinasanay ho an'ny famokarana pellet sinterlaorika. Ny zava-bitany dia nihatsara be raha oharina amin'ny tabilao nentim-paharazana. Izy io dia manana ny mampiavaka ny horonan-taratasy tsy miondrika, fotoana lava fanompoana ary milamina ary eny ambonin'ny velaran'ny roller aza. Fiara tokana dia raisina ho an'ny roller tsirairay. Ny fandefasana sy ny fanohanana ny roller roller dia ahitsy miaraka, ary ny fomba fampiraisana mitambatra dia raisina hanidy sy hanitsy. Ny fanaraha-maso elektrika dia manomboka ary ajanona amin'ny fifehezana teboka iray, izay mety amin'ny fiasan'ny paositra.
Xinxiang Chengxin hovitrovitra fitaovana Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra fitaovana hovitrovitra ao an-toerana sy fitaovana milina fitrandrahana. Ny orinasa dia mampifandray ny R & D, ny endrika, ny famokarana ary ny varotra, miaraka amin'ny renivohitra voasoratra 58 tapitrisa yuan, mpiasa maherin'ny 500 ary mpiasa teknika mihoatra ny 80. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena Xiaoji, Tanànan'i Xinxiang, Faritanin'i Henan, mirefy 80000 metatra toradroa sy velarana fananganana 40000 metatra toradroa. Faharoa, ny vokatra lehibe ananan'ny orinasa dia misy andiana motera mihetsiketsika, efijery mihetsiketsika, feeder mihetsiketsika, conveyor vibrant, crushers, conveyor fehikibo, ascenseur siny, conveyor de bucket rojo ary vokatra sy kojakoja hafa, totalin'ny andiany 20 mahery, mihoatra ny 400 fepetra arahana. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny metallurgy, harena ankibon'ny tany, arintany, indostrian'ny simika, akora fananganana, herinaratra, injeniera amin'ny arabe sy tetezana ary indostria hafa.
Xinxiang Chengxin vibration Equipment Co., Ltd. dia manaraka ny paikadim-bahoaka ary manana ekipa teknika avo lenta sy ekipa mpivarotra efa za-draharaha. Ny famokarana sy fivarotana efijery azo zahana CGS banga ho fitarihana lehibe indrindra, ny vokatra dia ampiasaina amin'ny metallurgy, fitrandrahana, arintany, indostrian'ny simika, fitaovana fananganana, herinaratra, injenieran'ny arabe sy tetezana ary indostria hafa, dia tao amin'ny firenena, ny hafanam-pon'ny mpampiasa. Fitaovana hovitrovitra Xinxiang dia tanjon'ny fikatsahana fahamarinana, fanavaozana, namana tonga soa ao an-trano sy any ivelany mifandraika amin'ny orinasanay, mifanakalo hevitra momba ny fiaraha-miasa.
Fitaovana hovitrovitra Xinxiang Chengxin dia manana kalitao azo antoka sy vidiny mirary. Ny efijery azo ahitsy CGS rehetra azo ovaina ao amin'ny trano fanatobiana entana dia tsy maintsy mandalo fanaraha-maso kalitao hentitra ary mahafeno ny fenitra kalitao alohan'ny handaozany ny orinasa. Ny fenitra avo lenta, matsiro ary lesoka aotra no tena takiana amin'ny mpiasa. Rehefa manasonia baiko amin'ny orinasanay ny indostrian'ny fangatahana dia mila manamarika ianao fa ny fomba fandoavam-bola faritan'ny orinasanay dia fandoavambola, famindrana banky ary fandefasana vola. Raha misy fiovana vetivety dia hifandray aminao ara-potoana izahay.
Xinxiang Chengxin vibration Equipment Co., Ltd. dia nahavita zava-bita lehibe tamin'ny indostrian'ny fitaovana metallurgical noho ny fampiharana ny fitantanana mahia ary ny fahatsapana ny fitombenana mety hitrandrahana sy ny fahombiazany. Noho ny fanohanana sy ny fahatokisan'ny indostrian'ny fangatahana nandritra ny taona maro, ny orinasa dia mandray ny mpanjifa ho foibe ary mandray ny fangatahany ho hery mitarika. Ny kalitaon'ny efijery azo ahitsy CGS dia eken'ny indostria. Tongasoa ireo namana avy amin'ny sokajin-javatra rehetra mba hitsidika, hitarika sy hifampiraharaha amin'ny orinasa. Andao isika hiara-mamorona mileage vaovao eny an-dalana.
Specifications Mihorona sy lava Fitaovana roller amin'ny efijery Isan'ny horonana fanaovana sivana
CGS Φ102 * 1000 Polyurethane mitambatra, vy vy na roller seramika
Φ102 * 1020 26
Φ102 * 1040
Φ102 * 1050
Φ102 * 1070 25
Φ102 * 1150
Φ102 * 1200 26
Φ105 * 1200
Φ105 * 1380
Φ125 * 1380
Φ102 * 1400 27
Φ102 * 1450 27
Φ95 * 1550
Φ102 * 1550
Φ115 * 3136
Φ133 * 3136
Φ119 * 3155
Φ125 * 3980
Φ130 * 3980
Φ130 * 4000 23
Φ130 * 4152
Φ140 * 4750 26
Previous: Efijery azo ahodiana andian-tsarimihetsika Cfhs
Manaraka: Sarimihetsika Zsl Cold Mine